Video Nkata # 1 - ChatRut
Camera ga-enyere gị aka! Ntọala a ga-anọgide na-arụ ọrụ ruo mgbe ihu gị dị anya na etiti. Ọ bụrụ na etinyere ọnọdụ a, arụ ọrụ ahụ nwere nkwarụ na-akpaghị aka.
Gwa ndị enyi gị gbasara nkata chat chats kachasị amasị gị ugbu a!
Chat Roulette - nkwurịta okwu dị mma ma dị mfe n'oge ọ bụla n'ehihie ma ọ bụ n'abalị
Dika ndị ọkà mmụta sayensị na-ekwu, nsogbu siri ike nke ndị oge a bụ njedebe na ihe mgbochi ime nke na-egbochi nkwurịta okwu zuru ezu. Kedu ka anyị si ebi? Ụlọ, ọrụ, ụlọ ahịa na izu ụka, TV ma ọ bụ Intanet na mgbede, mgbe ụfọdụ - mgbakọ na ndị ọrụ. Ọ na-esikwu ike karie "nkwurịta okwu mmadụ na-ebi ndụ dị ka ụzọ ndụ. Ọhụhụ bụ isi ihe na-esi na mmekọrịta anyị na onye na-adịghị ekwu okwu na nkà ntị. Mana obi ụtọ anyị na-adabere na ike na omume nke nkwurịta okwu - ebe ịchọta onye obi gị, enyi ma ọ bụ nwa agbọghọ maka mkparịta ụka na-atọ ụtọ, nke na-abụghị nke na-ejighị n'aka? Anyị na-aghọ ndị ihere ma mechie, anaghị ezute n'okporo ámá, site n'aka onye ọrụ mara mma site na ngalaba na-agbata obi, echela na ị ga-aga onye mara mma na cafe. Enwere ụzọ si na oke obi ọjọọ a? Intanet, ndị na-enweghị obi ụtọ nke oge anyị, dị oke mkpa, nwere ike inyere anyị aka! Ekepụtara anyị video chat Roulette, e mere iji nye anyị ihe kachasị ọnụ ahịa ná ndụ anyị - nkwurịta okwu.
Video Roulette - oké osimiri ohere maka nkwukọrịta gị79012
Gịnị bụ nkata vidiyo a na otu esi enyere gị aka? Nke mbụ, nke a bụ nkwurịta okwu ndụ na ndị nwere mmasị na oge. N'enyeghị n'efu, ịnwere ike ikwurịta okwu na ndị ọbịbịa na nsọtụ ọzọ nke mba ahụ, kọọrọ gị mmetụta gị na ahụmahụ gị, mụta ọtụtụ ihe ọhụrụ na ihe na-akpali mmasị, dị nnọọ na-atụrụ ndụ na ịhapụ ihe omume kwa ụbọchị, n'ikpeazụ. Kwere, nke a bụ ohere dị ukwuu maka mmadụ ọ bụla, n'agbanyeghị okike, afọ, ọnọdụ mmadụ. Ihe na-adọrọ adọrọ, vidiyo Roulette bụ ihe mmejupụta nke ihe ijuanya: ị maghị tupu ị gafee onye ị ga - akparịta ụka ugbu a ma ọ bụ na minit 10. Usoro ahụ na-ahọrọ onye na-elekọta gị na-akpaghị aka, na-eji usoro ọnụọgụ abụọ! Iji mee nke a, ọ dị mkpa ịnweta igwefoto vidiyo na igwe iji jikọọ na Сhatroulette. Ụkpụrụ nke roulette na ihe ọ bụla ọzọ! Mana ọ bụ onye na-eburu gị ọtụtụ ihe ndị na-adọrọ mmasị, ndị na-akpali akpali ma na-akpali akpali nke nwere ike ịgbanwe ndụ gị.
Gini ka anyi puru imere gi? Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla!
Let okwu banyere uru nke Сhat Ruletka, na-eme ihe atụ ụfọdụ.
Imeri obi iru ala Otutu ndi mmadu na eche nnukwu nsogbu nke ezi nkwurita okwu: ihe ngbochi nke ime, ulo oru, enweghi obi uto na ihu ha na onwe ha wezuga mkpebi ime ka ha na ndi mmadu nwee ndu. Ma ị nwere ike ịgbanwe ndụ gị ka mma, chọta ndị enyi ọhụrụ na ọbụna ịhụnanya gị ma ọ bụrụ na i merie ihere gị! Chatlette Roulette 24 bụ ohere dị ukwuu iji kụziere gị nkwurịta okwu ma jiri nwayọọ nwayọọ kpochapụ ọtụtụ mgbagwoju anya na nkwurịta okwu. Nye ọtụtụ ndị ihere, naanị eziokwu ahụ bụ na onye na-ahụ maka enyemaka na-ahụ naanị na nyocha ihuenyo na-eme ka ị nwekwuo obi ụtọ na nchebe uche. Ya mere, naanị site n'ịgwa ndị mmadụ okwu dị iche iche, ị nwere ike inyere gị aka ịzụlite mkparịta ụka mkparịta ụka bara uru, mkparịta ụka dị mma na ọbụna ịgba ọsọ. Ee, ị ga-aga nke ọma!
Na-echekwa maka arụ ọrụ ruo mgbe ebighị ebi. Maka ndị ahịa na-ebi ndụ mgbe nile nsogbu, nsogbu nke enweghị nkwurịta okwu dịkwa mkpa. Nzukọ azụmahịa, ihe ngwọta nke oge ọrụ na ndị ọrụ ibe gị anaghị agụta - Achọrọ m ka ọ dị ọhụrụ, isiokwu ndị ọzọ na-enweghị isi na nke a na-akọwabeghị. Roulette Video 24 bụ ohere iji jikọọ mkparịta ụka ahụ n'oge ọ bụla. Ọrụ ahụ na-arụ ọrụ n'oge elekere, nke dị mma maka ndị nwere oge ọrụ ọrụ oge. Emechara nzukọ ahụ na elekere 10 nke ụtụtụ? Mepee nkata vidiyo na nkata na ikwiikwii oz o. Ị nwere ohere nkeji tupu oge ehihie? Gị na ndị na-arụ ọrụ ọjọọ na - ekwurịta okwu - ndị, ma ọ bụrụ na ọ bụghị na ha, ga - aghọta ma gbaghara "ọchịchọ ịchọrọ na oge ma mee ihe kachasị mma maka awa 24 n'ụbọchị?
Olileanya nke obi obi efu Ọ bụrụ na ị na-achọ mkpụrụ obi gị, ma n'ihi ihe ụfọdụ na ị pụghị ịchọta ya n'eziokwu, enwela obi nkoropụ. Nchịkọta ga-enyere gị aka n'ọchịchọ gị. N'ebe a, i nwere ohere dị ukwuu iji soro nwa agbọghọ mara mma ma ọ bụ nwa okorobịa na-adọrọ mmasị na-ekwurịta okwu. Mkparịta ụka n'arụ ụka nkata ọ bụla adịghị eme gị ihe ọ bụla! Nwee obi oma na enyi gi, ma gi onwe gi ga-acho ibe gi. Na nke a, ọ dịghị ihe na-egbochi gị ịkekọrịta kọntaktị maka nzukọ na-adịghị anọchite anya, ma onye maara, ma eleghị anya nke a bụ ọdịnihu gị?
Help na oge siri ike. Bad, oge siri ike onye ọ bụla nwere, onye ọ bụla makwaara na o siri ike idi na ịnọ naanị ya. Mgbe ọ na-enweghị onye ga-ekwurịta banyere nsogbu ha, kpaa nsogbu ndị na-egbu mgbu ma wụpụ mkpụrụ obi, ọ ga-abụ ihe a na-apụghị izere ezere. Ọ na-esiri anyị ike ịgwa ezinụlọ na ndị enyi banyere nsogbu anyị - ha nwere ike ghara ịghọta anyị, mmekọrịta anyị na ha ga-aka njọ. Mgbe ụfọdụ, onye ọbịbịa na ahụmahụ nke ndụ ya na ọhụụ nke ụwa na-aghọ ọkachamara n'akparamàgwà mmadụ. Site n'ịgwa onye nkata video chat 24 nke na-echegbu onwe gị ma na-ewute gị, i nwere ike inweta azịza maka ajụjụ bụ isi.Na njedebe, naanị iji kwuo okwu ma ọ bụ ọzọ, ọ bara uru ịge mmadụ ntị.
N'yịnye nkwurịta okwu obi ụtọ. Ị chọrọ ịkpọtụrụ, izute ndị ọhụrụ, mụta ihe ọhụrụ ma baara gị uru n'oge ọ bụla, chọpụta ihu na mkpụrụ obi gị? Egwuregwu vidiyo 24 bụ ihe dị gị mkpa. N'ebe a ị nwere ike ịnweta nkata dị mma banyere "ihe ọ bụla", mụta ihe ọhụrụ banyere ihe dị gị mma, chọpụta ebe ọhụụ ọhụrụ, gbasaa mbara igwe gị. Ị maghị onye videochat ga-ejikọ gị! Ị na-eme ihe ọ bụla, na onye na-eme ya? Mgbe ahụ, gọọmenti clink site na nyocha - ọ ga-eme ka ị nwekwuo ọṅụ ọbụna karị! Jikere iji sie ihe na-atọ ụtọ? Jụọ onye nwe ụlọ gị n'akụkụ nke ọzọ nke nyocha maka ndụmọdụ maka nri! Ị n'ime ịkụ azụ ma ọ bụ ụgbọ ala? Ọ bụrụ na ị na-enwe obi ụtọ izute otu onye ahụ hụrụ n'anya, ị nwere ike ịchọta ezigbo enyi gị na ndụ gị niile!
Odi mma gi na nkwurita okwu di mma karia ihe nile!
Video vidiyo Roulette bụ ohere ohere na-enweghị njedebe maka gị! Chọta ụwa nke nkwurịta okwu, gbasaa ebe ị na-aga ma zute ihe ọhụrụ! Anyị, n'aka nke ya, na-eche banyere àgwà nkwurịta okwu na webchat anyị. Vidio 24 bụ ebe na-agbaso iwu nke mmebi iwu ma ghara ikwe ka mmebi ukwu nke omume, omume na omume ọma. Iji chebe gị pụọ na oge ndị na-adịghị mma, anyị na-eji nlezianya nyochaa ihe na-eme na ntanetị, ma nyochaa ihuenyo nke ụlọ nkata anyị. Na-amụ ma na-agbaso iwu dị mfe nke nkata weebụ anyị, ma nwee nkwurịta okwu dị elu na nkwurịta okwu dị mma. Chat roulette - ọ na-akpali mmasị, na-akpali akpali, dị mfe na mgbe bara uru maka gị! Anyị na-echere gị n'oge ọ bụla nke ehihie ma ọ bụ n'abalị maka nkwurịta okwu dị elu na nke na-arụpụta ihe!
Nke mara mma video chats
Otu akụkọ nkata kachasị ama bụ , nke otu nwa akwụkwọ akwụkwọ Moscow bụ Andrei Ternovsky mere na November 2009, n'oge a bụ aha ezinụlọ ma debe ụda maka ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ nke na-elekwasị anya na ndị na-agagharị agagharị.
Na-egosi ọnwa ole na ole gara aga karịa ya na mba ụwa - Omegle (nke e mere na March 25, 2009), ọ bụ onye nwere ike ịmepụta ndepụta nke nkata nkata nke ụwa dum. Ọbụna ma ọ bụrụ na ọnụnọ nke Chatrulett dị ugbu a dị okpukpu iri karịa ọnụ ọgụgụ kachasị elu ya (otu narị puku na puku iri ise na nde 1.5 n'ụbọchị), nke a anaghị egbochi ya ịghara ịbụ onye ndú n'etiti ọrụ ndị nwoke na nwanyị. Andrei Ternovsky ka na-arụ ọrụ na ikpo okwu, na-agbalị ime ka akparịta ụka vidiyo ya dị mfe dị ka o kwere mee maka nkwurịta okwu. Otu n'ime ntanetị ndị ọhụrụ ọhụrụ bụ usoro ndebanye aha (site na ịkpọ òkù, maka ego, wdg) na ikike ịgbochi ndị ọrụ.
Nwa nke ụmụ akwụkwọ America bụ Leif K-Brooks Omegle.com na-enye ndị ọrụ ya nnwere onwe ime ihe: n'adịghị ka nkata nkata, ọ dịghị mkpa ichegbu onwe gị banyere ịdenye aha - nkwukọrịta ahụ bụ kpamkpam aha. Maka akụkụ nke ihuenyo gị, a ga-akpọ gị dị ka "Ị" ("Ị"), na onye gị na ya na-emekọ ihe (ma gị maka onye) - "onye ọbịa" ("onye ọbịa"). Ị nwere ike ikwurịta okwu ma ọ bụ site na ijikọ akparịta ụka vidiyo, ma ọ bụ site na ịhazi usoro ederede nke mkparịta ụka ahụ. Dịka nkata ịgba chaa chaa mara mma, Omegle na-ahụ ndị na-agagharị na ọnọdụ na-adịghị agbanwe agbanwe, mana maka ndị chọrọ n'ụzọ ụfọdụ ịkọwa ọchụchọ, enwere ike ịkọ ọdịmma ha. O di nkpa ikwu na iwu a na - enye Omegle aka ka o buru onye ndu n'oru ndi mmadu na - ekwu kwa ubochi nke ihe kariri mmadu 220,000
Webchat kachasi atọ, Bazoocam.org, na-arụ ọrụ na ọha-asụ French-German ma na-enwe ọganihu mmadụ 40,000 kwa ụbọchị. Ndị Russia na-ege ntị na nke a bụ ọtụtụ ihe na-akpali VideochatRU.com, nke kwa ụbọchị na-abịa banyere 10 puku mmadụ. Ụlọ ọrụ a anaghị achọ nbanye ndebanye aha ma edozie ya, nke na-enye ohere ka ị ghara ikwe ka nkwurịta okwu nke ihe zuru oke. Maka ndị na-achọ ezughị oke na enweghị nnwere onwe ime ihe, ọ bụ ihe ezi uche na-ele Facebuzz.com - ndị America na-akparịta ụka roulette, ebe ndị na-agagharị ga-adịtụ ala karịa VideochatRU.com, ma ha agaghị echegbu onwe ha banyere ịdị nro. Ndị na-achọ ịkọrọ ndị Russian ọrụ ga-abụ ndị bara uru iji lee anya na Videomail Mail.ru - nke abụọ kacha ewu ewu Russian chat roulette. A na-edozi nhazi, mana nkwurịta okwu na ya na-eduzi n'asụsụ nke asụsụ.
Mkparịta ụka vidiyo 18 n'enweghị ndebanye aha
Video Roulette 18 Plus n'enweghị ndebanye aha bụ ịmekọrịta echiche na mmetụta dị iche iche n'usoro mkparịta ụka n'enweghị nsogbu. N'ebe a, ị gaghị agwụ agwụ. Ọ bụrụ na onye na-aga n'ihu agaghị amasị gị ihe ọ bụla, gaa na nke na-esote ma nọgide na-enwe nkwurịta okwu obi ụtọ.
Chatrouletka free na-enweghị aha na ụmụ agbọghọ
Chat roulette na ụmụ agbọghọ? Ọ na-ada ka ọ na-adọrọ adọrọ, ọbụna na-atọ ụtọ! Na-akpali akpali nke ukwuu, n'ihi na ị nwere ike ịnụrụ ma hụ na webchat ọtụtụ ihe na-akpali mmasị. Ọbụna ile anya n'ime ime ụlọ nke onye ọzọ na-akpata ezigbo mmasị.
Modern video chat bụ ebe dị mma ịmepụta kọntaktị ndị mba ọzọ. Ị nwere ike, n'ezie, buru akpa gị na hitchhike n'ofe Europe, ma ọ ga-efu oge na ego. Mkparịta ụka roulette nwere ike ngwa ngwa ma nweere onwe ya ikwurịta okwu na onye ọ bụla nwere kpọmkwem otu nkata weebụ dị ka ị nwere. Ọ dị mfe ịmepụta mkparịta ụka: gaa na ya, pịa "Mba niile" ma họrọ mba. Ka ọ bụrụ taa - Germany (Germany).kwado ibe ha. Aghọtara m nke a dịka nwatakịrị mgbe m nụrụ otu akụkọ banyere otú nne ndị nna nna m n'oge Agha Ụwa Mbụ si jide ndị Germany, rụọ ọrụ ruo ogologo oge n'ugbo nke nnukwu ihe onwunwe, ma jiri ya rụọ ọrụ siri ike na o kpebiri ịlụ nwa ya . Ebe ọ bụ na n'oge a dọọrọ n'agha, nne nna m ochie alụọ di ma ọ bụ nwunye, ọbụna nwee ọtụtụ ụmụ, agbamakwụkwọ ahụ emeghị, mana akụkọ anyị na ndị Germany na - aga - (WWII - agụghị ya) agbanyesiri ike na ezinụlọ anyị na uche m.
B German chat roulet M na-agbaso echiche ọhụrụ. Achọrọ m ịghọta ihe ndị Germany oge a; Achọrọ m ịkọrọ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọ. Ọ bụ ihe na-asọ oyi ịsị, mana m nwere mmasị na nke ikpeazụ ahụ na ọdịdị: achọre m ịhapụ ma ọ bụ kweta akụkọ ụgha na ndị nwoke Germany dị mma karịa ndị agbata obi ha. Oge mbụ bụ ihe siri ike, dị ka German roulette na-agbanye ndị nnọchianya nke mmekọahụ siri ike - nke ọgbọ na mba nile (Germany ugbu a abụghị nanị ndị Germany, kamakwa ndị Russia, ndị Juu, ndị Turks, ndị Arab). Mgbe ahụ, ụmụ agbọghọ ahụ malitere ịbịa, mgbe ha kwusịrị okwu na onye m ghọtara na nne nna m ukwu nke na-agaraghị alụ nwanyị Germany ma ọ bụrụ na ọ lụghị di. Ma ọ bụrụ na m nọ n'ọnọdụ ya, ọ ga-abụrịrị na German ahụ ajụla aka nke aka na obi: n'ihi na ọtụtụ ndị nnọchianya nke Germany mara mma ma. ezi. Ana m ekwu ọbụna na ha nyere iwu na iwu ndị a bụ naanị ndị umengwụ nọ na Russia anaghị achị ọchị.
German webchat, nke a maara dị ka nkata mkparịta ụka na Germany, gosipụtara m otu ihe dị ịtụnanya na ndị Germany: ha niile na-ahụ maka ime ụlọ na n'èzí, ha na-edebe ụlọ ahụ n'echeghị anya. Mgbe m banyere na vidio vidio n'Ịntanet, m na-agbadata uwe ndị gbasasịrị agbada ma ọ bụ efere ndị a na-eteghị aka. Otú ọ dị, n'ebe obibi ndị mọnk dị iche, karịsịa ndị mba ọzọ, ya ejighị ụgwọ ọrụ ya na-arịgo. Ọ dị egwu iche ihe nkata vidio German gosipụtara n'akụkụ m. Echere m na ozugbo m nwetara ntakịrị dị ọcha n'ime ụlọ m, German chat roulette ga-agbanwuru ọzọ na nchọta m maka ndị na-agagharị na Germany.
Chat roulette 18 n'ihi na ndị okenye
Ahụ ndụ anyị bụ mgbe ụfọdụ enweghị atụ na juputara na ihe ijuanya. Mgbe, na-achọ obi ụtọ gị, ọ bụrụ na i nwekwaghị olileanya na ị ga-enwe ihe ịga nke ọma, ọ ga-eme ka ị nwee ohere ọzọ ịghọ onye obi ụtọ!
Nkọwa nkata 24 awa
Nke ndi mmadu na - achikota ndi mmadu na - abanye na Intaneti - nke bu ezi ihe. Na mkparịta ụka mkparịta ụka 24 (i nwere ike izute aha ọzọ - nkata vidiyo 24) - nke a bụ otu n'ime ngwaọrụ kachasị mma nke eziokwu a. Ka m kọọrọ gị banyere ya site n'ahụmahụ m.N'ịghọta nke a n'ụzọ zuru oke, anyị dere koodu maka Videotailer24 ka ọ rụọ ọrụ na ngwaọrụ niile: kọmpụta, laptọọpụ, mbadamba na smartphones na sistemụ ọ bụla. Anyị na-eleba anya na Os - Android na iOS kachasị ewu ewu ugbu a. Gụkwuo banyere nkata vidiyo nke na gam akporo.
N'odi, enweghi uzo di n'etiti mkparita uka weebụ na Android ma obu, ka anyi kwuo, na Windows. Ụkpụrụ nke ọrụ na arụmọrụ bụ otu:
I nwere ike ịrụ ọrụ n'enweghị ndebanye aha na free.
I nwere ike ịdebanye aha ma nweta akaụntụ nkeonwe gị. Ị nwere ike itinye foto gị na ya, otu n'ime ha (ịkwesịrị ịkọwa nke) ga-apụta na peeji nke "Videorulet24" ma ga-adị maka nyochaa ihe niile. Site na ịpị ya, onye ọrụ ahụ ga-aga na akaụntụ nke aka gị, ebe ha nwere ike ịhapụ ozi onwe - dịka ọmụmaatụ, na nkọwa kọntaktị ha.
Video Roulette na Android na-enyekwa gị ohere ịhọrọ mba nke ndị ọrụ ị ga-achọ ikori.
A na-ahọrọ onye na-ahụ maka otu onye na-ahụ maka otu (roulette!)
Nanị ihe dị iche bụ video chat na Android site na Windows - na ngosipụta na ihuenyo, n'ihi na akụkụ nke ikpeazụ na PC na nke smartphone dị nnọọ iche na nha zuru oke na akụkụ dị. Ọzọkwa, ma ọ bụrụ na desktọọpụ, obosara dị elu karịa elu, mgbe ahụ na ekwentị ọ bụ abụghị.
Ọ bụrụ na ị banyere roulette nkata site na smartphone, ị nwere ike ịnweta ụfọdụ nsogbu na igodo (nke a dabere kpamkpam na ụdị ihe ngosi nke ngwa). Na nke a, ndụmọdụ: ka iji tụọ roulette na Android adịghị akpata nsogbu ọbụla, wụnye ngwa na smartphone gị. Download video nkata na gam akporo, nakwa iji ya, bụ kpamkpam n'efu. Kedu ihe nke a na-enye?
Ime njem na igodo. Mkpọchi niile ga-ahụ anya, ya mere ọ dị mfe iji pịa ha.
Ngwa ahụ chọrọ obere RAM na ngwa ndị ọzọ gadget, na chat roulette na gam akporo ga-agba ọsọ ọsọ karịa ma ọ bụrụ na ị mepee nsụgharị nchọgharị ahụ. Maka ụdị ekwentị dị ala, nke a bụ uru bara uru.
A n'ozuzu, ojiji nke "VideoLet24" na ngwaọrụ mkpanaka nwere otu àgwà bara uru: ị nwere ike igosi onye na-eme gị ihe ọ bụghị naanị ime ime ụlọ gị, kamakwa ihe nkiri si n'obodo gị. Ọ na - apụta dịka ọ bụrụ na agbapụ online na kamera weebụ, naanị, n'adịghị ka nke ikpeazụ, a ga - eduzi vidio ahụ site na otu isi - na onye na - eme mkparịta ụka nwere ike ịjụ ihe ga - egosi. O doro anya na ikpo okwu vidio ndị a dị na Android na-ewu ewu na ndị ọrụ niile. Nke a na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịchọta ndị mmadụ gburugburu ụwa bụ ndị ga-ekweta na ha ga-abakwu nso. Dịkwa ka ilu amamihe ahụ na-ekwu, sị: "Enweghị 100 rubles, ma nwee 100 enyi."Ya mere gbalịa ikpo okwu video maka Android ma nwee obi ụtọ ya!
Otu esi enweta ikata vidiyo site na ekwentị
N'akwusa ikike iji kwurịta okwu n'enweghị ndebanye aha, nkata mkparịta ụka aghọwo ihe a ma ama. O doro anya na ọtụtụ ndị chọrọ ikwurịta okwu na chatrulette ọ bụghị nanị na ha nọ n'ụlọ n'azụ PC ma ọ bụ laptọọpụ, kamakwa site na ngwaọrụ mkpanaka - ekwentị ma ọ bụ mbadamba ụrọ.
Achọrọ m, dị ka onye nwere ogologo oge nke nkata weebụ, iji kwurịta banyere mgbanwe dị iche iche nke pụtara na nkata vidiyo. Nke a bụ ike ikwurịta okwu gị smartphone! Ọ nweghịkwa ihe usoro sistemụ gị bụ - Android ma ọ bụ iOS. A gaghị eme ndị nwere smartphones na Windows ndabere, dịka ọmụmaatụ si usoro Lyumiya.
Ọ bụrụ na ị si na Kazakhstan ma enweghị ike ịchọta nkwurịta okwu kwesiri ekwurịta maka nkwurịta okwu na ndị ọhụụ ọhụrụ, anyị nwere obi ụtọ iwebata nkata vidiyo GYR-GYR.
Mkparịta ụka anyị na-ejikọta ọtụtụ ndị na-adọrọ mmasị na ndị enyi na ndị obodo dị iche iche nke Kazakhstan.
Plant new friends - ọ bụ mgbe niile na-akpali! Mkparịta ụka vidiyo GYR-GYR na-enye gị ohere ọ bụghị naanị iji kwurịta okwu ma kwekọọ na onye gị na ya na-arụkọ ọrụ, kamakwa ịtụgharị uche na onye ị na-akparịta ụka, nke bụ ezigbo uru. Tụkwasị na nke a, na mkparịta ụka na-akparịta ụka ị gaghị enwe mmejọ ọ bụla mgbe ị na-ezute, ebe nkwurịta okwu na-ewere ọnọdụ dịka ọ dị ndụ. Nke a dị nnọọ iche site na mbụ nkata chat mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. N'ebe a na-ekwurịta okwu nke ọma, ọtụtụ ndị anaghị abụ ndị ha na-ekwu. Na Gyr-Gyr video nkata, ọ gaghị enwe ihe ịtụnanya dị otú a!
Otu nkata nke nkata bu ihe di mfe ma di nkpa na nkwukọrịta. Iji malite mkparịta ụka, ịkwesiri ịpị bọtịnụ "Malite" na windo ga-apụta na ihuenyo ya na foto nke onye na-eme ya. Ụlọ ntanetị na-arụ ọrụ na njedebe nwoke na nwanyị, n'ihi ya ị maghị onye ga-anọ na ihuenyo ahụ. Ọ bụrụ na ọ bụ n'ihi ihe ụfọdụ ị na-enweghi afọ ojuju maka ọhụụ ọhụrụ, ị nwere ike ịga n'ihu na-achọ onye na-eme mkpesa gị iji bọtịnụ "ọzọ". Ọzọkwa, nkata GYR-GYR abụghị aha na ọ dịghị achọ ndebanye na data onwe onye.
Ọrụ na-akparịta ụka gị agaghị enye gị ihe mere ị ga-eji nwee nkụda mmụọ, n'ihi na enwere ọtụtụ ndị okenye na ndị na-adọrọ mmasị na nkata ndị na-enwe obi ụtọ mgbe niile izute ma na-ekwu banyere ọdịmma ha. Ọ bụ ya mere na Kazakhstan mkparịta ụka vidiyo GYR-GYR dị ezigbo egwu na ụbọchị ọ bụla ndị na-ege anyị ntị na-aghọwanye ndị ọzọ. Ọtụtụ ndị bi na Kazakhstan achọpụtaworị na nkata vidiyo GYR-GYR dị mfe, dị mfe, ngwa ngwa ma ọ bụghị ihe siri ike. Chat roulette bụ ezigbo ohere, karịsịa maka ụdị ndị mmadụ na-anaghị eji nzukọ n'okporo ámá. N'ebe a ị ga-enwe ohere iji gosipụta amamihe gị ma ọ bụ nkwenye gị, na ịmara na a ga-enwe ndị ga-akwado gị.
Chat roulette GYR-GYR - nkata vidiyo a bụ maka ndị dị njikere iji ihe ize ndụ ma nye nhọrọ maka oge ahụ. A sị ka e kwuwe, ọ gaghị ekwe omume ikweta na n'ime ndụ anyị ọtụtụ ihe na-ekpebi site na ohere. Ma ọ bụrụ na ị na-agwụ ike ma ọ bụ bụrụ na ọ bụ ụbọchị ọjọọ, ọ bụrụ na ịnọghị n'ọnọdụ, ọ bụrụ na ịchọrọ maka ịhụnanya ma ọ bụ chọọ ịchụ nta ọsọ ọsọ, ọ bụrụ na ịnweghị enyi maọbụ na ị na-enwe mmetụta owu na mberede - gaa n'ụlọ mkparịta ụka anyị roulette! Na nkata anyị, ị ga-enweta ihe ọhụụ ọhụrụ a na-agaghị echefu echefu, nweekwa ike ijuanya otú ndụ gị ga-esi bụrụwanye ihe na-atọ ụtọ karị!
Video nkata: free chat
City - ihe kachasị mkpa maka nwoke nke oge a. Ndụ anyị siri ike ma mgbe ụfọdụ, ma ọ bụghị nkwurịta okwu nke ọma, enweghi ohere ọ bụla isoro ndị ọzọ kwurịta okwu, tụlee nsogbu ọ bụla, ma ọ bụ naanị ịkekọrịta ihe nzuzo ahụ. Ohere iji kparịta ụka na-enye gị ohere ịchọta onye ọ bụla n'akụkụ ọ bụla nke ụwa ma mejupụta ọdịiche dị na nkwurịta okwu n'ụzọ dị mfe ma dị mfe. Gwa na nkata vidiyo ma ọ bụrụ na ọ dị mfe ma dị mkpa maka gị!
Otu okwu "nkata": gini bu isi?
Ị chọrọ ịmara ihe na-adọta ọtụtụ mmadụ n'okwu ọhụrụ a? N'ezie, ihe niile dị mfe ma doo anya:
bụ ọṅụ na-ekwurịta okwu na ndị nwere mmasị;
online webchat, na-enye gị ohere ịmepụta nrọ nke nkwurịta okwu onwe onye na bench ogige ma ọ bụ na tebụl cafe;
Ụzọ isi jiri oge ntụrụndụ gị na-atọ ụtọ na ọbụna na-adọrọ adọrọ;
opportunity ịchọta onye na-ahụ maka ihe gbasara - onye na-ese vinema ma ọ bụ akwụkwọ, isiokwu ndị ọzọ.
Video Roulette na-eme ka ọtụtụ puku ndị ọrụ jikọta ọnụ, nke a bụkwa uru dị mkpa ya. Tụkwasị na nke a, nkata a dị na ogbo mgbe mmepe na-eme kwa ụbọchị, ma ihe a dum na-eme ka nkwukọrịta ahụ ghara ịdị adị ma bụrụ ihe na-enweghị isi, ma dị adị, dị ndụ, multi-faceted. Site na ntanetị weebụ n'efu, ị ga-enwe ihe iji mee ka mgbede mgbede ahụ dị njọ, mgbe mmiri ozuzo na-akụ aka na windo na windo, ọnọdụ ahụ na-aga ngwa ngwa na zero.
Talking, okwu, na-ekwu ...
Ihe ngosi nke Roulette - nkata vidio nke aha a bu ugbua mara nke oma - oburu ihe omuma nke uzo nkwurita okwu a. N'ọtụtụ ụzọ, ọrụ na-arụ ọrụ site na kọmputa nke ọha mmadụ, Internet dịnụ, na ngbanwe ahụ mesiri ike. Mkparịta ụka chatroulette bụ ihe na-enye ọṅụ maka introverts, mana ndị na-ahụ n'anya na-akparịta ụka ruo ụtụtụ.
Easy iji nkata - a iche iche tinyere. Ya mere, ịmalite mkparịta ụka, ọ dịghị mkpa ka ị gafee usoro ịdebanye aha ogologo, nke a dịkwa oke mma. Chat roulette dị ugbu a n'efu, na ị nwere ike jikọọ na onye ọzọ ọ fọrọ nke nta n'otu ntabi anya. Ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ na-eto eto kwa ụbọchị, nke na-eme ka enwekwu ohere izute onye na-adọrọ mmasị ma nye onwe ha mkparịta ụka nke ọma maka ogologo oge.Otu okwu nke Chatroulette bụ ụgbọ ala gị na ụgbọ oloko awara anya, na onye gị na ya na-emekọrịta ihe bụ otu onye njem ahụ. Ụkpụrụ ọhụrụ nke nkwurịta okwu na-abịa na Russia, webchat anyị bụkwa otu n'ime ihe kasị egbuke egbuke.
Uru nke mkparịta ụka efu bụ na onye ọ bụla nwere ike iji ọrụ ya niile. Ọ dịghị mkpa ka ị bụrụ onye na-eme ihe n'Ịntanet iji mụta iwu nke mkparịta ụka Roulette. Transitions site n'otu ọrụ gaa na onye ọzọ na-eme ngwa ngwa ma ghara inwe ihe mgbochi ọ bụla, nke pụtara na ọtụtụ na-etinye aka na ụdị nkwurịta okwu a.
Otu obodo nke kewara ekewa dika iwu nke onye ma obu ozo nke uzo ya na mgbe ufodu o na-edozi ya. Ọfọn, mkparịta ụka vidio na-enye ohere ịmebi mgbakọ ndị niile dị ugbu a wee ghọọ ihe ị chọrọ. Ihere na mkpebi, na-egbukepụ egbukepụ, nwee ọgụgụ isi na ọ bụghị - anyị nile bụ ndị agụụ na-agụ maka nkwurịta okwu ma chọta ọka ha na ya. E nwere ọtụtụ ndị nọ na Russia taa bụ ndị dị njikere ikwurịta okwu n'ụzọ dị otú ahụ dị mma ma chọpụta na ya ọtụtụ uru maka onwe ha.
Iji nkata vidiyo nke free na Russian na-eme omume ugbu a, ọ dịghị mkpa ịla azụ!
Russian video nkata mkpakọrịta nwoke na nwaanyị99014
Russian mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na video nkata bụ ihe mere ịgbanwe ndụ gị ma malite nkwurịta okwu kwa ụbọchị na ndị sitere ná mba dị iche iche. Mkparịta ụka vidio maka ịlụ nwoke ga-abụ ezigbo nchọpụta, yana ịbanye na ụwa ọhụrụ, na ịbịaru site na nkata vidiyo ga-abụ ụgwọ ọrụ maka obi ike.
Anwansi nke uzo mgbasa ozi Russia na-adi onye obula!
Mmadu na-ebi n'uwa nke ikwurita uka mgbe nile. Ma, olee mgbe oge na-ezughị ezu ma ọ bụ na ọ bụghị onye ziri ezi na-ekwurịta banyere ọnyá. Ugbu a, a ga-edozi ajụjụ ndị a n'otu ntabi anya! O zuru ezu iji redio chat chat site na Ịntanetị ịchọta ezigbo kọntaktị ma dị na-ekwu si.
N'elu eziokwu nke puku afọ nke atọ - ụlọ oriri vidio na ebe nrụọrụ weebụ. Mkparịta ụka n'oge ọ bụla n'ụbọchị ga-enye ndị niile na-ahụbeghị usoro nkwurịta okwu ha ọṅụ. Mkparịta ụka vidio maka ndị nwoke na ndị inyom nke afọ dịgasị iche iche na ụdị statuses - ọhụrụ na World Wide Web.
Video Roulette: Gbalịa Gị Fate
Video Roulette bụ ọrụ na-adọrọ mmasị na nke bara uru nke na-enye gị ohere ịmara onye na-adọrọ mmasị na-ahapụghị ụlọ gị ma jiri oge ntụrụndụ gị dị elu. Roulette nkata na-edeghị aha na-enye gị ohere ịmalite ịkpa nkata fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo. Gị onwe gị na-ekpebi oge nke mmekọrịta ọhụrụ na anaghị eburu onye ọrụ ọ bụla ọrụ na mkparịta ụka ahụ. Ụkpụrụ nke usoro ntụgharị vidio bụ nchọpụta na-akpaghị aka maka onye ọ bụla kwesịrị ekwesị.N'ebe ahụ, n'okporo ámá mepere emepe, anyị nwere ike izute nwoke nke ọdịmma ya kwekọrọ na nke anyị. Maka ndị na-ahụ nnọọ nkata, enwere nkata. Nanị ọmịiko bụ na ọ bụghị mgbe niile ka anyị ga-ahụ ihe onye anyị na-achọ ịlụ dị ka eziokwu. E kwuwerị, n'Ịntanet, onye ọ bụla na-agbalị ịmepụta onwe ya ezigbo onyinyo. Ma enwela obi nkoropụ! Mkparịta ụka vidiyo ga-enyere aka na onye na-ebi ndụ na-ekwurịta okwu n'Ịntanet, ma ọ bụghị oyiyi na aha njirimara na "avatar".
Main àgwà nke Internet zuru oke interlocutor
Mkparịta ụka n'ịntanetị na karịsịa mkparịta ụka na-enyerekarị ndị mmadụ aka ịmata onwe ha, wepụ nsogbu nkwurịta okwu ma mee ndị enyi ọhụrụ n'akụkụ dị iche iche nke ụwa, ma eleghị anya na-ahụ maka ndụ. Ma, ọ na - emekwa na "onye na - egbu egbu" nwere ike ijide anyị, mgbe anyị "kwusịrị okwu" onye ọ na - abụghị ihe dị na nkata vidiyo - achọghị m ịnọdụ na Internet! Ya mere, oleezi otu esi mata ọdịiche dị n'etiti "trolls" site na nnweta ndị kwesịrị ekwesị zuru oke? Kedu àgwà ndị onye iro gị ga-enwe na mkparịta ụka vidiyo na otu esi eme ka ị ghọta onwe gị na nkwurịta okwu na Intanet, isiokwu a ga-agwa
Ndị atụmatụ na uru dị na nkata vidiyo.
Gịnị bụ video chat? Ndị maara nke ọma site n'ime na peculiarities nke ọrụ nke ngwa a nwere ike ịhọrọ azịza nke ajụjụ a n'ụzọ dị iche iche. Ọtụtụ kweere na nke a bụ nanị ụzọ isi jiri oge ntụrụndụ gị, nke a bụ ntụrụndụ, ọ dịghị ihe ọzọ. Otú ọ dị, e nwekwara ndị nwere ike ịhụ ihe ndị bara uru na ohere dị na nkata vidiyo. Chọta ọkara nke ọzọ, gbasaa ebe ị nọ, na mberede ị chọta onwe gị n'akụkụ dị iche iche nke ụwa. Ma nke ahụ abụghị ihe niile. Kedu otu esi mụta iji chọpụta uru kachasị na iji nkata vidiyo?
Otu ohuru, dika uzo ohuru nke okwu
Ịchọrọ ikwu okwu na achọghị ịchọpụta oge n'ogologo akwụkwọ ozi, mgbe ahụ, nkata weebụ bụ ihe dị mma maka gị. Site n'enyemaka nke ọrụ a, ụwa dum na-emeghe maka gị, ị nweghị oge, ị nwere ike ikwu okwu dịka ịchọrọ, ị nwere mmasị mgbe niile na ndị mmadụ na-ekwurịta okwu. Ọ dịghị mkpa iche echiche banyere ederede, ihe ị ga-ede, ma ị nwere mmasị na onye gị na ya na - emekọ ihe - na - ezigara ya na kamera ma na - enwe mkparịta ụka.
Chatterelle bụ ụzọ magburu onwe ya isi zute mmadụ nwoke
Wịnị bụ nkata a na-amaghị aha nke akpakọrịta mara mma na ndị ọrụ? Ikekwe, eziokwu ahụ bụ na onye ọ bụla nke na-abata na ya nwere ike ịchọta zuru ezu ma gbanwee onwe ya. N'otu oge ahụ, ọ dịghị mkpa ma ọ bụrụ na ọnọdụ ya dị adị, ma ọ bụ onye ezinụlọ ma ọ bụ onye na-abụghị onye ezinụlọ - na ntaneti vidiyo, onye ọ bụla na-adị nhata, na-emeghe, na kpamkpam n'enweghị onye ọ bụla.
Onye ọbịa nke ebe nrụọrụ anyị na-amalite na onye ọ bụla na-ahọrọghị onye ọ bụla ma malite ikwurịta ya, ma ọ bụrụ na ọ naghị amasị onye na-eme mkpesa, ọ nwere ike ịgbanwe ya n'ụzọ ọzọ (iji mee nke a, pịa bọtịnụ ọzọ).
Main atụmatụ nke nkata anyị:
Ọkpụkpọ nkata gị bụ ihe pụrụ iche na nke dị iche na ụlọ nkata ndị ọzọ. N'okpuru ị nwere ike ịhụ uru ise:
Fast registration - iji malite ịrụ ọrụ na ọrụ ị na-ekwesịghị iji oge dị ukwuu. A na - edebanye aha n'ime nanị minit 5.
Agba-na-clock access - ị nwere ike tinye nkata na oge ọ bụla nke ụbọchị ma chọpụta onwe gị onye: nwoke ma ọ bụ nwanyị.
Mgbe ndi mmadu na-ege nti mkpuchi - otutu ndi oru sitere n 'uwa nile biara na ebe a kwa ubochi. Ị nwere ike ịchọta onwe gị onye si na United States, Denmark, Great Britain, Russia, Spain, Ịtali nakwa otú ahụ na 9,7008
Nchọpụta ịchọpụta enyi - ịkwesighi ịnọdụ ala na saịtị ụbọchị niile iji zute ndị nwere mmasị. Dekọọ ozi vidiyo na ndị ọrụ ma kọọrọ anyị banyere onwe gị. Ndị mmadụ ga-elele ihe ndekọ ahụ ma kpọtụrụ gị. Ị nwekwara ike ịchọ ndị enyi n'otu ụzọ ahụ
Nhọrọ nke okike - naanị anyị na ị nwere ike ịhọrọ ụdị nwoke ahụ na-emekọ ihe ọnụ ma wepụ ndị ị na-achọghị ịkọwa okwu.